किताबहरुमाथि आस्था राख्नु (‘ईमान’ का ६ वटा आधारहरु) – Islam Guide
किताबहरुमाथि आस्था राख्नु (‘ईमान’ का ६ वटा आधारहरु)
किताबहरुमाथि आस्था राख्नु ('ईमान' का ६ वटा आधारहरु)
किताबहरुमाथि आस्थाको अर्थ-
कुरआनको लेखन कार्य पूर्ण दक्षताका साथ गरिन्छ।
अल्लाहले भक्तहरुका लागि आफ्ना रसूल (सन्देष्टा) हरुमाथि किताबहरु अवतरण गर्नु भएको छ भन्ने कुरामाथि दृढतापूर्वक आस्था राख्नु। यी ग्रन्थहरु उहाँका वाणी र वचन हुन्। यसमा ज्ञानको ज्योति, सत्य कुरा, लोक र परलोकमा प्राप्त हुने सफलताका रहस्यहरू छन्।
किताबहरुमाथि आस्था राख्नु ईमानको एउटा आधार हो। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे ईमानवालाहरु हो ! अल्लाह, उहाँका रसूल र उहाँको रसूल (मुहम्मद) माथि अवतरित किताब र जुन ग्रन्थहरु यो भन्दा पूर्व अवतरित भयो ती सबैमाथि आस्था राख।” (श्रोत- सूरह अन्-निसा : ४/१३६)
अल्लाहले आफू, आफ्नो रसूल (मुहम्मद), उहाँमाथि अवतरित किताब; कुरआन र यस भन्दा पूर्व अवतरित सम्पूर्ण ग्रन्थहरुमाथि ईमान ल्याउने आदेश दिनु भएको छ।
किताबहरुमाथिको आस्थाले कुन विषय वस्तुलाई समेटेको छ?
१) अल्लाहद्वारा अवतरित हो भन्ने आस्था राख्नु।
२) अल्लाहको वाणी हो भन्ने आस्था राख्नु।
३) अल्लाहका किताबहरुमाथि आस्था राख्नु, जसतै… कुरआन हाम्रो सन्देष्टा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) माथि अवतरित भयो। तौरात मूसा (अलैहिस्सलाम) माथि र इन्जील ईसा (अलैहिस्सलाम) माथि अवतरित भयो।
४) त्यसका प्रमाणित कुराहरुलाई सत्य मान्नु।
कुरआनका विशिष्ट गुण र विशेषताहरु-
कुरआन हाम्रो सन्देष्टा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) माथि अवतरित अल्लाहको वाणी हो। आस्थावानहरु उक्त ग्रन्थलाई धेरै सम्मान गर्दछन्, त्यसैको निर्देशन अनुसार जीवन यापन गर्दछन्, दिनरात त्यसैको पाठ र मनन् गर्नमा सक्रिय रहन्छन्।
यो कुरआन हाम्रो पथप्रदर्शक र मृत्युपछिको जीवनमा सफलता प्राप्तिको साधन हो।
कुरआनका छुट्टै पहिचान, गुण र अनेक विशेषताहरु छन्, जसले गर्दा यो अघिल्ला ग्रन्थहरू भन्दा भिन्न छ, जस्तै…
१) कुरआन ईश्वरीय ग्रन्थहरुको सार हो। अघिल्ला ग्रन्थहरुमा रहेका इकेश्वरवादलाई समर्थन र पुष्टि गर्दछ।
अल्लाहले भन्नु भएको छ– “हामीले सत्यका साथ यस किताबलाई तिमीमाथि अवतरण गर्यौं जसले अघिका ग्रन्थहरुको पुष्टि गर्दछ र ’emको संरक्षक हो।” (श्रोत- सूरह अल्-माइदा : ५/४८)
अघिका ग्रन्थहरुको पुष्टिको अर्थ- अघिल्ला ग्रन्थहरुमा रहेका आस्था र सूचनाहरुको समर्थन गर्दछ। त्यसको संरक्षकको अभिप्राय- अघिका ग्रन्थहरुको संरक्षक र गवाह हुनु हो।
२) विभिन्न भाषा-भाषीमा विभाजित भएका सम्पूर्ण समुदायहरुले कुरआनलाई स्वीकार गर्नु पर्छ र यसको अभिलाषा अनुसार कर्म गर्नु पर्छ। यद्यपि उनीहरु कुरआन अवतरण भएको युगदेखि जति पछि जन्म लिए पनि। यसको विपरित अघिल्ला ग्रन्थहरु केही सम्प्रदाय, खास भाषा तथा सीमित अवधिको लागि मात्र थिए। अल्लाहले रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लाई निर्देशन गर्दै भन्नु भएको छ– “ममाथि यो कुरआन वह्य (प्रकाशना) गरिएको छ, मलाई तिमीहरु र जो जसकहाँ पुग्छ सबैलाई सचेत गर्ने आदेश दिएको छ।” (श्रोत- सूरह अल्-अन्आम : ६/१९)
३) अल्लाहले स्वयम् यसको सुरक्षाको जिम्मा लिनु भएको छ। त्यसैले यसमा अहिलेसम्म फेरबदल भएको छैन र हुने पनि छैन। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हामीले कुरआन अवतरण गर्यौं र हामी नै त्यसको सुरक्षा गर्नेछौं।” (श्रोत- सूरह अल्-हिज्र : १५/९) त्यसैले यसमा रहेका सम्पूर्ण कुराहरु सत्य छन् र यसको पुष्टि गर्नु अनिवार्य छ।
कुरआनप्रति हाम्रो दायित्व के हो त?
हामीले कुरआनलाई माया र आदर गर्नु पर्छ, ’cause अल्लाहको वाणी भएकोले यो भन्दा राम्रो, सत्य र उच्च कोटिको अरु कुनै किताब छैन।
हामीले ध्यानपूर्वक यसको तिलावत (पाठ) र अध्ययन गर्नु पर्दछ। कुरआनका उपदेशहरु, सूचना र कथाहरुमा मनन् गर्नु पर्दछ। आफ्नो जीवनलाई कुरआन अनुकूल ढाल्नु पर्दछ।
हामीले यसका आदेशहरुलाई अनिवार्य रुपमा मान्नु पर्छ, यसका नीति र नियमहरुलाई आफ्नो जीवनको आदर्श बनाउनु पर्छ।
आईशा (रजियल्लाहु अन्हा) सित रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को आचरणको ’boutमा सोध्दा उहाँले जवाफ दिनु भयो… “कुरआन नै उहाँको आचरण (अख्लाक) हो।” (श्रोत- अहमद : २४६०१, मुस्लिम : ७४६)
हदीसको तात्पर्य- उहाँको जीवन र क्रियाकलाप कुरआन र इस्लामि विधानहरुको पूर्ण व्यवहारिक प्रमाण थियो। ’cause उहाँले पूर्ण रुपमा कुरआनको अनुसरण गरेर देखाउनु भयो। त्यसैले अल्लाहले उहाँको जीवनलाई हामी सबैका लागि एउटा आदर्श र नमुना घोषित गर्नु भएको छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “जो कोही अल्लाहसँगको साक्षात्कार, अन्तिम दिनको आशा र अल्लाहको बढी सम्झना गर्दछ, उसको लागि निश्चय नै रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को जीवन उत्तम आदर्श हो।” (श्रोत- सूरह अल्-अह्जाब : ३३/२१)
अघिल्ला ग्रन्थहरुको ’boutमा हाम्रो धारणा के हो त?
मूसा (अलैहिस्सलाम) माथि अवतरित ग्रन्थ तौरात र ईसा (अलैहिस्सलाम) माथि अवतरित ग्रन्थ इन्जीलको ’boutमा मुस्लिमको आस्था के छ भने यी ग्रन्थहरु पनि अल्लाहद्वारा नै अवतरित हुन्, यी दुवै ग्रन्थहरुमा पनि अल्लाहको आदेश, सोझो मार्गमा डोर्याउने अर्ति-उपदेश, जीवन यापन गर्ने तरिका र ज्ञानका ज्योति छन्।
तौरात र इन्जील अल्लाहद्वारा नै अवतरित ग्रन्थहरु हुन्, तर यसमा निकै फेरबदल र परिवर्तन भएकोले जुन कुरा कुरआन र हदीसद्वारा प्रमाणित हुन्छ त्यसलाई मात्र सत्य मान्ने मुस्लिमको आस्था रहेको छ।
तर अल्लाहले हामीलाई कुरआनमा सूचित गर्नु भएको छ कि अहले-किताब (यहूदी र ईसाइ) हरुले आ-आफ्ना किताबमा फेरबदल र थप-घट गरेका छन्, त्यसैले ती ग्रन्थहरु अल्लाहले अवतरण गरे अनुसार यथावत रुपमा सुरक्षित छैनन्।
वर्तमान तौरात त्यो तौरात होइन जुन मूसा (अलैहिस्सलाम) माथि अवतरित भएको थियो। ’cause यहूदीहरुले त्यसमा फेरबदल, थप-घट र धेरै जसो विधानहरुका साथ खेलवाड गरेका छन्। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “कतिपय यहूदीहरुले शब्दहरूलाई तिनका वास्तविक स्थानबाट फेरबदल गर्ने गर्दछन्।” (श्रोत- सूरह अन्-निसा : ४/४६)
त्यसैगरी वर्तमान बाइबल त्यो इन्जील होइन जुन ईसा (अलैहिस्सलाम) माथि अवतरित भएको थियो। ’cause ईसाइहरुले त्यसमा फेरबदल र धेरै जसो विधानहरुलाई परिवर्तन गरेका छन्। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “’emमध्ये एउटा दल यस्तो पनि छ, जो किताब पढ्दा आफ्नो जिब्रोलाई बाङ्गो पार्दछन् ताकि तिमीहरुले त्यसलाई ग्रन्थको अंश ठानोस्, जबकि त्यो ग्रन्थको अंश होइन र ’em यो अल्लाहको तर्फबाट हो भन्छन् जबकि त्यो अल्लाहको तर्फबाट होइन र यसरी नै ’em जानी-जानी अल्लाहले भनेको भनेर अल्लाहमाथि झूठो आरोप लगाई रहेका छन्।” (श्रोत- सूरह आलि-इमरान : ३/७८)
“उनीहरुमध्ये जसले भन्यो, हामी ईसाइ हौं” उनीहरुसित हामीले वाचा लियौं, ’emले पनि ती शिक्षाहरूको अधिकांश भाग बिर्सिदिए जसको पाठ ’emलाई दिइएको थियो। अन्तमा हामीले उनीहरु बीच कयामत (महाप्रलय) सम्मको लागि शत्रुता र इर्ष्याको आगो सल्काई दियौं। ’em जे जति गर्दछन् त्यस’bout चाँडै नै अल्लाहले ’emलाई अवगत गराउनु हुनेछ।” (श्रोत- सूरह अल्-माइदा : ५/१४)
त्यसैले हाल अहले-किताबको हातमा रहेको बाइबलमा धेरै जसो गलत आस्था, असत्य कुरा र मिथ्या कथाहरु पाइन्छन्। त्यसैले हामीले ती कुराहरुको मात्र पुष्टि गर्दछौं जसको पुष्टि कुरआन र सही हदीसले गरेका छन् र ती सबै कुराहरुलाई असत्य ठान्दछौं जसलाई कुरआन र सही हदीसले झूठा ठहर गरेका छन्। त्यस बाहेक बाँकी कुराहरुको न पुष्टि गर्नेछौं न नै झूठा ठहर गर्नेछौं बरु त्यसको ’boutमा चुप लाग्नेछौं।
तै पनि मुस्लिमले ती ग्रन्थहरुलाई आदर गर्दछन्, त्यसको अवज्ञा गर्दैनन्, ’cause त्यसमा फेरबदल गर्न नसकेका केही अल्लाहका सत्य कुराहरू पनि पाइन्छन्।
किताबहरुमाथि आस्थाका केही फाइदाहरु-
किताबहरुमाथि आस्थाका केही फाइदाहरु निम्न छन्-
अल्लाहले आफ्ना भक्तहरुलाई कति रेखदेख र माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञात हुन्छ। त्यसैले त उहाँले प्रत्येक समुदायको मार्गदर्शन तथा लोक र परलोकको सफलताको लागि ग्रन्थहरु पठाउनु भयो।
अल्लाहको अपार ज्ञानको ज्ञात हुन्छ, किनकि प्रत्येक समुदायको लागि उनीहरुको अवस्था, स्थान र पिढीलाई मध्यनजर गरि नीति, नियम र विधान पारित गर्नु भयो। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हामीले तिमीहरुमध्ये हरेकका लागि एउटा विधान र कार्यप्रणाली बनायौं।” (श्रोत- सूरह अल्-माइदा : ५/४८)
यी किताबहरु अवतरण गरे बापत अल्लाहको कृतज्ञता व्यक्त गर्नु, ’cause यी किताबहरुमा लोक र परलोकको सफलताका रहस्यहरु छन्। त्यसैले अल्लाहको अमूल्य वरदानको कृतज्ञता व्यक्त गर्नु पर्दछ।